ကျန်းမာလှပတဲ့ အသားအရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် အသင့်ရှိနေတဲ့ Innisfree Green Tea Balancing Skin Care - Shop
ကျန်းမာလှပတဲ့ အသားအရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် အသင့်ရှိနေတဲ့ Innisfree Green Tea Balancing Skin Care0738
စိုပြေပြီး ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ အသားအရည်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မို့က ပျိုမေတွေကိုကိုတွေရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပါ …😇
ကျန်းမာလှပတဲ့ အသားအရည်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မို့ဆိုရင် ဘယ်လိုစကင်းကဲတွေက ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိလဲဆိုတာ သိရမှာပေါ့ … အလှကုန်တွေကြားမှာ နာမည်တစ်ခုယူထားတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Innisfree က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Innisfree Green Tea Balancing Skin Care Set Big EX အကြောင်းလေးကို ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် …🍃
Shop မှာ ရောင်းချနေတဲ့ Innisfreem Green Tea Balancing Skin Care Set Big EX လေးထဲမှာတော့ Green Tea Balancing Skin (200ml) ၊ Green Tea Balancing Lotion (160ml) နဲ့ Green Tea Balancing Cream (10ml) တို့ဟာ ခရီးသွားရင် အလွယ်တကူယူသွားနိုင်တဲ့ Green Tea Balancing Skin(25 ml) နဲ့ Green Tea Balancing Lotion (25 ml) တွေပါ ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ အရမ်းတန်တဲ့ Set လေးမို့ စကင်းကဲ ချစ်သူတွေ အပြေးလေးဝယ်လိုက်ကြရအောင်နော် …🏃‍♀️
Innisfreem Green Tea Balancing Skin Care Set Big EX လေးထဲမှာပါဝင်တဲ့ စကင်းကဲလေးတွေအကြောင်း ပြောပြပေးသွားမယ်နော် … 😍
Green Tea Balancing Skin (200ml) လေးကတော့
ဂျယ်ဂျူလဘက်စိမ်းနှင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ အရည်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အသားအရေကို စိုပြေစေပါတယ် ချွေးပေါက်ထဲရှိ ပိတ်ဆို့နေသော အညစ်အကြေးများကိုအရေပြားအလွှာထိ ဝင်ရောက်သန့်စင်ပေးလို့ အသားအရေကိုကြည်လင်စေပါတယ်… ရေလိုကြည်လင်တာကြောင့် လိမ်းလိုက်ရင် စေးကပ်မှုမရှိဘဲ အလွယ်တကူ စုပ်ယူနိုင်ပါတယ် … Amino Acidကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Betaineဟာ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးပြီး အသားအရေကို သဘာဝအတိုင်း စိုပြေစေပါတယ် ….
☘️Innisfree Green tea balancing lotion လေးကေတာ့
Balanciing skin လေးကိုအသုံးပြုပြီး Balancing Lotion လေးကိုအသုံးပြုပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …
ပုံမှန် အသားအရေနဲ့ပေါင်းစပ်အသားအရေးရှိသူတွေ အတွက်အထူးသင့်လျော်တဲ့ နို့ရည်လေးပါ။ Lotion လေးအနည်းငယ်ကို လက်ဖဝါးထဲထည့် ကာ မျက်နှာပြင်အနှံ့ကို အသားထဲစိမ့်ဝင်အောင် ပုတ်လိမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် … ရေလိုကြည်လင်တာကြောင့် လိမ်းလိုက်ရင် စေးကပ်မှုမရှိဘဲ အလွယ်တကူ စုပ်ယူနိုင်ပါတယ် Amino Acidကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Betaineဟာ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးပြီး အသားအရေကို သဘာဝအတိုင်း စိုပြေစေပါတယ် ….
☘️Innisfree Green tea seed cream လေးကတော့
အသားအရေခြောက်သွေ့သူများအတွက်လတ်ဆတ်တဲ့ လက်ဖက်စိမ်းနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်… လက်ဖက်စိမ်းစေ့ရဲ့အဆီက ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေကို အတွင်းပိုင်းထိ စိုပြေစေပြီး အရေပြားထဲမှာ ရှိတဲ့ရေဓာတ်ကို ကြာရှည်ထိန်းသိမ်းပေးထားပါတယ် green tea cream လေးကို ပုံမှန်အသုံးပြူပေးခြင်းဖြင့် အေးမြတဲ့ရာသီမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ အသားအရေမွဲခြောက် ကြမ်းတမ်းခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ် နူးညံ့တဲ့ Cream အဖြစ် ဖန်တီးထားပြီ အသားအရေကို အာဟာရဖြည့်ပေးတဲ့အတွက် နူးညံ့စိုစွတ်နေစေတဲ့ အသားအရေလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ် ….
🍀 Innisfree Green Tea Balancing Skin Care Set Big EX ကို ဒီလင့်ခ်တွင် > > > http://bit.ly/2tw78x1 < < < ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် 🍀
🍀 အခြားစကင်းကဲမျိုးစုံကိုလည်း ဒီလင့်ခ်တွင် > > > http://bit.ly/2So6fyK < < < ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် 🍀
Previous Articleအလှကုန် အမှတ်တံဆိပ်တွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ The Ordinary Skin Care များအကြောင်းNext Articleပျိုမေတို့အတွက် ကမ်းခြေဖက်ရှင်များ